पोर्टोमा के गर्ने - तपाईको यात्रामा रमाइलो गर्न उत्तम विचारहरू Absolut यात्रा
पोर्टोमा के गर्ने
सुसाना Godoy | | पोर्चुगल
तपाईं आश्चर्यचकित हुन सक्नुहुन्छ पोर्टोमा के गर्ने र हामी तपाईंलाई धेरै तरिकाले जवाफ दिन गइरहेका छौं, ताकि तपाईंले विवरण गुमाउनु हुँदैन। किनकि यो सबैभन्दा प्रभावशाली शहरहरूमध्ये एक हो, डुइरोको किनारमा र रक्सीको पालना पनि। तर पोर्टो यस भन्दा धेरै हो र आज हामी यसलाई अलि बढी पत्ता लगाउन लाग्यौं।
त्यहाँ धेरै कुनामा र गतिविधिहरू छन् जुन हामी यसलाई लिन सक्दछौं, तर तपाईं भागहरू द्वारा जानु पर्छ। किनकि ती सबै आवश्यक छन् र हामी प्रेम गरे पछि हामी सोचे भन्दा बढी। यदि तपाईं पहिले नै हुनुहुन्छ भने तपाईंको यात्राको योजना बनाउँदै यस पृथ्वीमा, तपाईले पछि केहि चीजहरू गर्न बिर्सनुहुन्न।
1 Avenida de los Aliados सँगै हिंड्नुहोस्
2 लुइस I ब्रिज पार गर्नुहोस्
3 लेल्लो र इरमाओ बुकस्टोरमा भ्रमण
4 साओ बेन्टो ट्रेन स्टेशन र यसका टाइलहरू
5 पोर्टोमा के गर्ने: एक स्वादिष्ट फ्रान्सेसिन्हा प्रयास गर्नुहोस्
6 Clerigos टावर चढ्नुहोस्
7 Br पुलहरूमा डुat्गा यात्रा
8 वाइन स्वादको साथ वाइनरीमा जानुहोस्
9 अद्भुत क्याफे मैजेस्टिकमा एक स्टप
10 स्टक एक्सचेन्ज दरबारको भ्रमण
Avenida de los Aliados सँगै हिंड्नुहोस्
पोर्टोमा त्यहाँ धेरै चीजहरू छन्, तर यो एक मुख्य हो। किनकि यो ठाउँको मध्य भाग हो, जहाँ टाउन हल पनि अवस्थित छ। यस क्षेत्रको बीचबाट बग्ने भवनहरू १ th औं शताब्दीदेखि २० औं शताब्दीको सुरुदेखि नै सुरु हुन्छ। तिनीहरू सबै समयको विवरणले पूर्ण छन्, जुन केहि क्षणहरूको लागि रमाईलो गर्न लायकको छ। तपाईसँग पनि, वर्गमा,aकांस्यले बनेको मूर्ति जसको नायक पेद्रो IV हो जो घोडामा छ। कुनै श doubt्का बिना, यो तपाईंले यो जस्तो ठाउँमा आफ्नो प्रवासको आनन्द लिनुपर्ने पहिलो चरणहरू मध्ये एक हो, तर त्यहाँ अझ धेरै छन्।
लुइस I ब्रिज पार गर्नुहोस्
कुनै श doubt्का बिना, पोर्टोमा सबैभन्दा धेरै प्रतीकात्मक ठाउँहरू। लुइस I ब्रिज एक हो कि भने शहर संग जोड्दछ Vila nova de gaia। यो १1886 मा उद्घाटन गरिएको थियो र डुएरो नदीमा अवस्थित छ। अवश्य पनि, त्यहाँ एक छवि को लागी एक हजार शब्दहरु को लागी हुनेछ। साथै, यदि तपाईं अन्तिम मिनेटमा जान सक्नुहुन्छ र सूर्यास्तको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ, यो सँधै ठूलो सुअवसर हुनेछ जुनसँग सधै पहुँच हुँदैन। यो पुलमा दुबै फ्लोर र दुबैमा पैदल यात्रा छ, जसले यसरी पैदल यात्रीहरूलाई बढी सहज तरीकाले पार गर्न मद्दत गर्दछ। ठूलो फलामको आर्चले सधैं धेरै पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्दछ।
लेल्लो र इरमाओ बुकस्टोरमा भ्रमण
सही ऐतिहासिक केन्द्रमा हामी फेला पार्दछौं लेल्लो र ईरमा किताब स्टोरवा यो भन्दैन कि यो संसारको सुन्दर मध्ये एक को रूप मा आफूलाई स्थिति छ। तसर्थ, पर्यटकहरू यस ठाउँलाई हराउन चाहँदैनन् र यसमा झुण्डिनेछन्। यदि तपाईंले ढोकामा लामो लाइन देख्नुभयो भने, तपाईंलाई किन थाहा हुन्छ। यो सत्य हो कि तपाईंले प्रविष्टि तिर्नु पर्छ, जे होस् यदि तपाईं पुस्तक किन्नुहुन्छ भने तपाईं यसमा छुट पाउनुहुनेछ। सबै आयसँग, दाग कांच विन्डोजहरूमा पहिले नै हल्का सुधारको आवश्यक पर्ने धेरै भागहरू निश्चित गरिएको छ। पोर्टोमा गर्न यो अर्को अत्यधिक सिफारिश गरिएको चीज हो!
साओ बेन्टो ट्रेन स्टेशन र यसका टाइलहरू
यो होइन कि हामी तपाईलाई आइपुग्ने बित्तिकै ट्रेनमा चढ्न चाहन्छौं, तर हामी तपाईंलाई स्टेशनले हामीलाई के देखाउँनु पर्छ पत्ता लगाउन चाहन्छौं। किनकि यो ठाउँ जहाँ फोटोग्राफ दिन को क्रम हो। यी सबै टाइल प्यानलका लागि जुन सबै पर्यटकहरू समातिन्छ। त्यहाँ २० हजार भन्दा बढि टाईलहरू छन् जुन यो स्थानको सजावट गर्दछ। तिनीहरूमा ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व दिनको क्रम हो। हामी ग्रामीण इलाकामा जीवन, साथै सिउटाको विजय वा वाल्देभेजको युद्धलाई अन्य क्षणहरूमा हाइलाइट गर्न सक्छौं। भनिन्छ कि यो विश्वको सब भन्दा सुन्दर स्टेशन हो।
पोर्टोमा के गर्ने: एक स्वादिष्ट फ्रान्सेसिन्हा प्रयास गर्नुहोस्
किनभने प्रत्येक भ्रमणको पनि सामर्थ्य प्राप्त गर्न यसको पज छ। तसर्थ, एक सबै भन्दा स्वादिष्ट र पूर्ण पकवान फ्रान्सेसिंह भनिन्छ। बारेमा केही प्रकारको स्यान्डविच यसमा ह्याम वा सॉसेज जस्ता मासु हुन्छ र त्यसपछि बाहिर पनीरले पूर्ण हुन्छ र सबै निश्चित मसलाको साथ सॉसमा नुहाउँछन्, जुन स्वादिष्ट हुन्छ। यस चटनीको अवयवहरूमा यो भनिन्छ कि यसमा टमाटर र बीयर पनि छ। तपाइँ पक्का हुनुहुन्छ कि यो प्रेम गर्नुहुन्छ!
Clerigos टावर चढ्नुहोस्
शहरको पुरानो ठाउँमा हामीसँग छ Clerigos टावर। पोर्टो को मुख्य बिन्दुहरु को अर्को। यसको उचाइ meters 75 मिटर भन्दा बढि छ, तर यसमा आन्तरिक सिढीहरू छन् जुन तपाईं पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईं चढ्न चाहानुहुन्छ भने। अवश्य पनि, त्यहाँ करिब २240० चरणहरू छन्। चर्च र टावर दुबै हिस्सा जनताका लागि खुला छन् र भुक्तान गरिएको छ (दृश्यको भाग जसको लागि करीवeयूरो लागत छ), तर यो राम्रोसँग लायक छ। माथिबाट तपाईं शहर को लगभग ईर्ष्यालु दृश्यहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसैले यो अर्को अनुभव पनि हो जुन तपाई यस ठाउँको भ्रमण गर्दा तपाईले आनन्द लिनुपर्दछ।
Br पुलहरूमा डुat्गा यात्रा
कहिलेकाँही हामी एकमा धेरै चीजहरू देख्न सक्छौं। यो त्यस्तै हो जब हामी डु when्गामा यात्रा गर्छौं र यसको लागि पनि धन्यवाद, हामी शहरको पुलहरूको आनन्द लिनेछौं। त्यसैले राम्ररी चर्चित, र पहिल्यै डन लुइस I ब्रिज उल्लेख गरिएको अतिरिक्त, तपाईं पनि आनन्द लिन सक्नुहुनेछ Infante डॉन एनरिक वा साओ जोओ पुल, अरूलाई मारिया पालाई बिर्सनु हुँदैन। २० भन्दा कम युरोको लागि तपाईं डुउरो नदीको साथ लगभग एक घण्टा हिँड्न सक्नुहुन्छ। कुनै श doubt्का बिना, यो पोर्टोमा के गर्नु पर्ने अर्को उत्तम विकल्पहरू छन्।
वाइन स्वादको साथ वाइनरीमा जानुहोस्
हो, यो अर्को हो पोर्टो सबैभन्दा प्रसिद्ध आकर्षणहरू। त्यसकारण वाइनरीमा जानु र दाखमद्य चाख्नु परम्परा भन्दा बढी हो। यसैले तपाईं गाईड टूरको लागि रोज्न सक्नुहुनेछ, जुन लगभग एक घण्टासम्म रहन्छ, जसमा उनीहरूले तपाईंलाई विभिन्न कोठा र यस पेय बनाउने सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू देखाउँछन्। डुईरो नदीको किनारमा तपाईं डोन लुइस आई ब्रिज पार गरेर मात्र धेरै संख्यामा वाइनरी भेट्टाउनुहुनेछ। यो सत्य हो कि केही वाइनरीहरूले नि: शुल्क भ्रमण गर्दछन्। त्यसोभए यो सधैं सल्लाह दिइन्छ कि आफूलाई सूचित गर्नुहोस् र चाँडो जानुहोस् ताकि त्यहाँ कुनै भीडभाड नहोस्।
अद्भुत क्याफे मैजेस्टिकमा एक स्टप
यो केवल केहि हुँदा आराम गर्नेको लागि मात्र होईन, तर तपाईं म्याजेस्टिक क्याफेले प्रदान गर्नुहुने अतुलनीय सबै कुराबाट पनि आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। एक आकर्षक स्थान र यो एक हो Calle Santa Catarina मा ऐतिहासिक क्षेत्रजुन १ 1921 २१ मा उद्घाटन गरिएको थियो। विभिन्न व्यक्तित्वहरू उनीहरूको भेला हुने प्रकारका क्याफेहरूमा त्यहाँ भेला भए। यसैले हामीले उल्लेख गरेको महत्त्व प्राप्त गर्दै। एक आधुनिकतावादी स्थापत्य शैलीको साथ, यो विश्वको सबैभन्दा सुन्दर क्याफेहरू मध्ये एक मानिन्छ।
स्टक एक्सचेन्ज दरबारको भ्रमण
तपाईं यो ठाउँबाट पनि उम्कन सक्नुहुन्न। स्टक एक्सचेन्ज दरबार एक हो नियोक्लासिकल भवन जुन १1841१ मा निर्माण गरिएको हो। यो ठाउँ जहाँ यसले केहि घटनाहरू आयोजना गर्दछ, यसैले यस क्षेत्रको पर्यटन आकर्षण मध्ये एक हो। यसका धेरै कोठाहरू छन्, यद्यपि केहि सार्वजनिक रूपमा खुला छैनन्। तर यसको महत्त्वको महत्त्व र सौन्दर्यको रूपमा, जस्तै सुन समाप्त भयो र गोल्डन कोठा भनिन्छ। एक महान यात्रा जुन सँधै छोटो हुन्छ!
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » पोर्टोमा के गर्ने